[झटारो] आसनग्रहण समारोह - व्यंग्य - प्रकाशितः आश्विन ११, २०७४ - नेपाल
[झटारो] आसनग्रहण समारोह
हाम्रो विद्यालयको नमुना शौचालय उद्घाटन समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूको अति व्यस्तताले गर्दा निर्धारित समयभन्दा एक घन्टा ढिलो कार्यक्रम सुरु हुन गएकामा म क्षमायाचना गर्छु । अब ढिलो नगरीकन म आसनग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउँछु ।
आजको यस गरिमामय सभाको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुहुन विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु । व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई माया गरेर पाल्नुभएका माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु ।
श्रीमान् सचिवज्यूलाई विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु । माफ गर्नुहोला, सचिवज्यूलाई विशिष्ट नभई विशेष अतिथिको आसनग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसनग्रहणका लागि माननीय सांसदज्यूलाई अनुरोध गर्छु । माननीयज्यू, गल्ती भयो, माफ पाउँm ! कृपया, यसरी रिसाएर नहिँडिदिनुहुन अनुरोध गर्छु ।
धन्यवाद माननीयज्यू ! हामीमाथि दया गरेर आसनग्रहण गरिदिनुभएकोमा उहाँलाई जोडदार तालीले स्वागत गरिदिनुहुन म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीलाई अनुरोध गर्छु । माननीयज्यूले प्रमुख अतिथि बनाउने भए मात्र आउँछु भन्नुभएको थियो । त्यसैले अचानक उहाँ यहाँ आउनुभएको थाहा नभएर यो त्रुटि हुन गएको प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।
म पुन: आसनग्रहण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छु । श्रीमान् जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु । विद्यालय निरीक्षकज्यूलाई आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु । नगरपालिकाका उपमेयरज्यूलाई आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु । यस वडाका वडाध्यक्षज्यूलाई अतिथिका रूपमा आसनग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छु ।
स्वयंसेवक विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, मञ्चमा अरू १५–२० वटा कुर्सीहरू थप्नुहोला ।
हाम्रो भाग्य ! नबोलाए पनि हामीलाई माया गरेर उपस्थित हुनुभएका यसै वडाका नवनिर्वाचित महिला वडा सदस्यज्यू, नेपाली कांग्रेसका वडा सभापतिज्यू, नेकपा एमालेका वडा कमिटी अध्यक्षज्यू तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा इन्चार्जज्यूहरूलाई मञ्चमा आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु । राप्रपा, राजपा, सद्भावनालगायत विभिन्न राजनीतिक दलबाट उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु ।
त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यूहरू, शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिज्यूहरू, यस वडामा रहेका विभिन्न क्लबका अध्यक्षज्यूहरू, आमा समूहका अध्यक्षज्यू, सहकारीका अध्यक्षज्यू, प्रहरी चौकीका इन्चार्जज्यू, स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखज्यू, समाजसेवी, चन्दादाता, उद्योगी, ज्येष्ठ नागरिक, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षज्यूहरू, उद्यमी, साहू, समाजसेवी, पत्रकार, गुरु पुरोहित, धामी, झाँक्री, माताजी, बाबाजी, हाम्रो इलाकाका ठेकेदारज्यूहरू, डनज्यूहरूलगायत सबैलाई आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु ।
आसनग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ । यस क्रममा अतिथिज्यूहरूलाई आसनग्रहण गराउँदा अगाडि पछाडि पर्न गएकामा, मञ्चमा अगाडिको लाइनमा राख्नुपर्नेमा स्थान अभावका कारण पछाडि राख्नुपरेकामा हामी अत्यन्तै लज्जित छौँ, त्यसका लागि म क्षमायाचना गर्छु । मञ्चमा आसनग्रहण गराइएका व्यक्तित्वहरूभन्दा माथिल्लो वा समान हैसियतमा रहेका व्यक्तित्वहरू वा मञ्चमा बस्न योग्य व्यक्तित्त्वहरू अरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई नाम टिपाइदिनुहोला । हामी क्रमश: आसनग्रहण गराउँदै जानेछौँ । कार्यक्रमलाई छोटो र छरितो बनाउनुपर्ने भएकाले म आसनग्रहण कार्यक्रमलाई एकछिन स्थगित गरेर अतिथिहरूलाई ब्याच वितरण तथा खादा भिराउने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सीता र रीता मिसहरूलाई अनुरोध गर्छु । ब्याच तथा खादा राखेको डोको मञ्चमा ल्याइदिन स्वयंसेवकहरूलाई अनुरोध गर्छु । यसबीचमा म पुन: आसनग्रहण गराउनुपर्ने नामहरू सङ्कलन कार्यमा लाग्छु । धैर्य गर्नुहोला ।